I-NSA yethule iNetball League
ABADLALI bamaqembu azoyibamba kwiNetball Telkom League yakulo nyaka nemifaniswano yabo eyenziwe ngabakwaPuma Isithombe: NSA FACEBOOK
Umqhudelwano uzoba seMangaung Sports Complex eBloemfontein nalapho kuzobe kusalandelwa imigomo yezokuphepha kwi-Corona. Imidlalo izoba phakathi kuka-Okthoba 14 kuya ku-Okthoba 27. Umengameli we-NSA, uCecilia Molokwane ubonge iTelkom ngokuqhubeka nokubaxhasa, ekubeni lo mdlalo usathathwa njengosafufusa kuleli.
“Sibonga kakhulu ukubona ukusebenzisana noTelkom futhi ngiyakholelwa kakhulu ekutheni singenza lo mdlalo ube sezingeni eliphezulu. Lokhu kusebenzisana kwethu kuyinto esiyidingayo ekufezeni amaphupho esinawo ngalo mdlalo. Sinethemba lokuthi buzoqhubeka bube nezithelo ezinhle,” kusho uMolokwane esitatimendeni. Awu-13 amaqembu azodlala kulo nyaka njengoba kukhona neProteas U-21. IProteas izosebenzisa lo mqhudelwano ukuzicijela iNdebe yoMhlaba eseFiji ngonyaka ozayo.
UMengameli weKwaZulu-Natal Netball, uGugu Ngema, ukuthokozele ukufakwa kweKingdom Queens kulo mqhudelwano okusho ukuthi mabili amaqembu akulesi sifundazwe azodlala kuwona njengoba phambilini besimelwe iKingdom Stars, ompetha esigabeni esincane seligi ngonyaka odlule.
“Umsebenzi wethu esiwenzayo uyabonakala njengoba sesizoba nelinye iqembu kulesi sifundazwe. Sisebenze kanzima. IQueens izokwakhiwa abadlali abasebancane ukuze badlulele eqenjini iKingdom Stars eminyakeni ezayo.
UNgema uncome ukudlondlobala akubona kwenzeka kwi-netball njengoba sebekwazi ukuthola abaxhasi. UPrecious Mthembu ongukaputeni weStars, uthe: “Ukubona iTelkom iqhubeka isixhasa kuyinto ethokozisa kakhulu futhi kuyakhombisa ukuthi siya kude kulo mdlalo. Okwethu njengeStars ukwenza kahle futhi siqede phezulu kwiligi.”